I-7 yemifanekiso edumileyo ekufuneka uyazi | Abadali be-Intanethi
UMary Rose | | Abadlali
Ukukhangela iireferensi ezibonakalayo yi-asethi ephindaphindiweyo njengomthombo wokuphefumlelwa phakathi kwamagcisa, abayili kunye nabazobi. Ewe, lelinye lawona manyathelo abalulekileyo xa usenza isitayile soyilo okanye enye. Mhlawumbi awubazi abaninzi kwimizekeliso, yiyo loo nto namhlanje sikuzisela uthotho lwabazobi abadumileyo.
Siza kukuxelela kancinci malunga nobomi bakhe kunye nesimbo. Ya en la ngokweneneinto, estas ilI-ustradoras eyaziwayo ikwazile ukuba yireferensi kwihlabathi jikelele.Ngoku umsebenzi wabo wamkelwa kwaye wamkelwa ngabo bonke, ngamnye kubo unesitayile esikhethekileyo.
1 7 ababonisi abaziwayo ababhinqileyo
1.1 UPaula Bonet
1.3 UEva Vazquez
1.4 USara Fanelli
1.5 U-Anne John
1.6 UPaula Troxler
1.7 Coconut uMbhali
7 ababonisi abaziwayo ababhinqileyo
Apha ngezantsi sikuxelela malunga nabazobi abadumileyo abasi-7, abathe bawongwa kuwo wonke umsebenzi wabo wobugcisa kwaye basebenzisana namaziko amaninzi aziwayo kwihlabathi liphela.
Umthombo: Paula Bonet
UPaula Bonet ngu Umzobi waseValencian, umzobi kunye nombhali, wazalwa ngoDisemba 10, 1980. Ngoku uhlala eBarcelona. Uphumelele kwiYunivesithi yasePolytechnic yaseValencia, kwaye uqeqeshelwe ukupeyinta nokubhala. Ngo-2002 wafumana i-scholarship ye-Promoe, apho wagqiba izifundo zakhe kwiYunivesithi yamaKatolika yaseSantiago de Chile. Ngo-2006 wafumana enye i-scholarship, awathi ngayo waya eNew York ukuya kufunda e-NYU.
Ekuqaleni komsebenzi wakhe wagqiba ekubeni agxininise kwipeyinti yeoli kunye nokuprinta. Kodwa ngo-2009 wagqiba Gxininisa umsebenzi wakho kumzekeliso. Ukususela ngaloo nyaka, waphucula ubuchule bakhe bokupeyinta ioli nokukrola. Kwi-2018 wafumana iMedali yeNkcubeko yeNkcubeko (ukwahlukana okuphezulu kwi-Generalitat Valenciana). Une sebenzisana kumaphephandaba afana El País, IDiari Ara y Uludwe.es.
ULuci Gutierrez ngu Umzobi wesiCatalan, eyaziwa ehlabathini lonke. Wazalelwa e-Barcelona ngo-1977 isimbo siyacokiswa kwaye sinesigqebelo, ithatha njengereferensi yobudlelwane bothando, ukuhenda kunye nokuziphatha komntu. Ubugcisa bakhe buye babonakala ezincwadini, oopopayi kunye namaphulo eentengiso, kumajelo osasazo ohlukeneyo nakumazwe ahlukeneyo. Usebenzele amaphephandaba afana neNew Yorker, iNew York Times, iWashington Post kunye neWall Street Journal.
Phakathi kwemisebenzi yakhe eyaziwa kakhulu sifumana "IsiNgesi asilula", "Miss Galassia" okanye "La valigia delle carabattole".
Umthombo: uEva Vazquez
UEva Vazquez ngu umzobi waseMadrid. Ufundele ulwakhiwo kunye noopopayi kwaye ekuqaleni wayebonakala eneendlela ezahlukeneyo, kodwa ekugqibeleni badibana kwaye bamkhokelela kwihlabathi elibandakanya uthotho lwemiboniso bhanyabhanya kunye nemvelaphi yefilimu. Ibhulorho yakhe eyomeleleyo kukuba unokuzoba zonke izakhiwo anokuzicingela, ukusuka kwezona zinto zisengqiqweni ukuya kwezona zibalaseleyo.
Ngenxa yoko, uye waba ngomnye wababonisi ababalulekileyo nabakhethekileyo abanxulumene nehlabathi lopapasho kwilizwe lethu. Umsebenzi wakhe ugxile kwintelekelelo nakumzekeliso, osebenza ngengqondo echazwa ngokudityaniswa kweembono njengoko zicwangcisiwe njengoko zichazwa ngokwesitayile. Okwangoku uzinikele kwimifanekiso kumaphephandaba, iincwadi, iimagazini zobungcali, njl.
USara Fanelli (owazalwa ngo-1969) ngu Igcisa laseBritani kunye nomzobi ozalelwa e-Itali, owaziwa kakhulu ngeencwadi zakhe zabantwana ezinemifanekiso. Wazalelwa waza wakhulela eItali, eFlorence. Wafunda eLiceo Classico Michelangelo. Kamva wayeza kufudukela eLondon ukuya kufunda ukuyila imizobo nemizobo. Kwakunyaka wakhe wokugqibela kwiKholeji yaseRoyal yoBugcisa apho uSara wafumanisa ihlabathi lemifanekiso yabantwana. Enye yeencwadi zakhe ezaziwa kakhulu yayiliQhosha. awathi ngenxa yalo wafumana imbasa yeMacmillan yoMzobo weNcwadi yeMifanekiso yaBantwana. Ukusukela ngoko lo mzobi waseBritane upapashe phantse iincwadi ezingama-20.
Ngokubhekiselele kwisitayile kunye nobuchule bakhe, uSara usebenzisa ikholaji kunye nendibaniselwano enonyameko kakhulu yemathiriyeli kunye neefonti. Ubambisene namajelo abalulekileyo afana neNew York Times, iNew Yorker, kunye nezinye ezifana nePinguin, iFaber kunye neFaber, iTate Britain, iTate Modern okanye iVictoria neAlbert Museum.
Ana juan (1961, Valencia) es una de las uninzi lwabazobi bamaSpanish abaziwayo kumazwe ngamazwe. Su ubugcisa ha sido kawonke wonkekokuchitha en isityhiiiists como El Payi, El emlonyenio, KaZwelonke Geographic hambaer, Elle, Marie kucace, The New abantu base-yorkers, ixesha, abantu o Newsweek. Uye wasebenzisana namaphephancwadi afana nala ILa Luna de Madrid kunye neMadriz, ibonelela ngabo kuphela imicu yabo ehlekisayo ukuza kuthi ga ngoku, zonke zimnyama namhlophe kunye ne-expressionist tints.
Ana juan ha sido una de las oovulindlela boncwadi lwabantwana ngesiCatalan, olunezihloko ezingaphezu kwamashumi amathathu ezipapashwe ngolo lwimi. Ha obShumiumkile inomboloosos kuqalaiOS como ilkunjalongqaokanye e sungula izinto ezintshaadokanye, yomzalire otros ufumene i pImbasa yeSizwe yoMzobo, uMphathiswa weNkcubeko waseSpain ngo-2010.
Umthombo: Paula Troxler
Paula troxs es una umzobi kunye nomzobo ovela e-Willisau (Switzerland), wazalwa ngowe-1981. En umsebenzi wakhe ubalaselisa imibala kunye nemizobo yabantwana kunye neyomntwana. Su trabigalikhi se ha ukuthumelauEsto en abahlukeneyoas ukuthumelaosintokuninzi kwi Suiza njengoko kwi ngaphandlebalekajero. Wafunda unxibelelwano olubonakalayo kwiDyunivesithi yeSayensi eSetyenziselwe ubuGcisa kunye noYilo, apho wayeya kugqiba ukuba yingcali kwimizekeliso. Ngo-2006 wagqiba ekubeni aseke esakhe isitudiyo eBerlin, apho wayeza kuqalisa khona umsebenzi wakhe wokuba ngumzobi ozimeleyo. Ekugqibeleni ngo-2008, wayeza kuthatha isigqibo sokufudukela eZürich, apho ahlala khona kwaye esebenza ngoku.
Es umzobi kunye nomzobi weplastiki. Wazalelwa eQuintanar del Rey (Cuenca). Kwiminyaka nje eli-14 ubudala, lo mzobi wayesazi ukuba ufuna ukufunda ubuGcisa obuhle. Wathweswa isidanga kwiFine Arts, kodwa kangangexesha elithile wagqiba ekubeni agxile ekufotweni. De kube ekugqibeleni, wagqiba ekubeni azinikele ngokupheleleyo ekuzobeni nakwimizekeliso. Impembelelo yakhe inikwa ziinkxalabo zakhe, iingcinga kunye neengcinga. Ijongana nemixholo efana nothando, utshintsho lwemozulu, ukuzingca okanye ithemba. Sebenzisana neempawu kunye nabapapashi abanje ngeGrijalbo, iCasio okanye iGlamour Spain.
Ukuba ucinga ukuba eli nqaku likwazi kancinci. Apha Ndikushiyela olunye uluhlu lwemizobo yaseSpain, mhlawumbi ubungayazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Abazobi abadumileyo